Musharaxiinta oo war kasoo saaray askarta la sheegay in lagu laayey gobolka Tigray - Caasimada Online
Home Warar Musharaxiinta oo war kasoo saaray askarta la sheegay in lagu laayey gobolka...
Musharaxiinta oo war kasoo saaray askarta la sheegay in lagu laayey gobolka Tigray
Muqdisho (Caasimada Online) – Midowga Musharaxiinta Mucaaridka ayaa walaac xoogan ka muujiyey xaalada ciidamadii tobabarka loogu qaaday Ereteriya, xili ay maalmihii u dambeeyay waalidiinta dhalinyaradaas ay muujinayeen cabasho balaadhan.
Afhyaeenka Midowga Musharaxiinta Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in wal-walka iyo walbahaarka la qabaan waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashooda kaga maqan yihiin Ereteriya.
Waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo cabashada kasoo yeeraysa waalidiintaas, oo walaac ka qaba halka ay ku dambeeyen carruurtoodii la geeyay Ereteriya, kuwaasi oo lasoo warinayo inay ka qeyb galeen dagaalkii qaraara ee TPLF.
Sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay inuu ka jawaabo cabashada waalidiitaas, isla markaana uu faah-faahin ka bixiyo halka ay ku sugan yihiin dhalinyaradaas iyo xaaladooda caafimaad.
Hadalkan ayaa imanaya xili ay maalmihii u dambeeyay isasoo tareysay cabasho kasoo yeeray waalidiinta dhalinyaro loogu qaaday dalka Ereteriya si loogu soo tobabaro, oo ay la’yihiin nolol iyo geeri wax ay ku sugan yihiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay inay jiraan ciidamo tobabar loo qaaday oo ka qeyb galay dagaalka TPLF, xili ay ilo xogagaal ah oo siyaasiyiin caan ah soo warinayaan inay ciidamada Soomaaliyeed ka qeyb qaateen dagaalkaas, oo xukuumadda Abiy Axmed dhamaadka sanadkii hore ku qaaday maamulka TPLF.